यी हुन् वैदेशिक रोजगारीमा जाने वडाध्यक्ष
१५ आश्विन २०७५, सोमबार १९:०४
सङ्खुवासभा, १५ असोज । खाँदबारी नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । ५ नं. वडाका अध्यक्ष बमहादुर घले वैदेशिक रोजगारमा दक्षिण कोरिया गएको एक वर्ष वितेको छ ।
वडा अध्यक्ष घलेले नगरपालिका कार्यालयमा एक निवेदन समेत दर्ता गरेको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ । नगरपालिका कार्यालयमा वडा अध्यक्ष घलेले घरायसी कामका कारण घरबाहिर जानु पर्ने भएकाले आफूमा कार्यालयको काममा उपस्थित हुन नसक्ने पत्र दिएको बताइएको छ ।
उनको पत्रमा कार्यवाहकको जिम्मेवारी वडा सदस्य श्यामप्रसाद निरौलालाई दिएका छन् । कार्यवाहक निरौलाका अनुसार आपूmलाई वडा अध्यक्ष घलेले काम गर्ने जिम्मेवारी पत्र दिएकाले सो जिम्मेवारी सम्हालिरहेको बताए ।
तर वडा अध्यक्ष घले घरयासी कामका लागि नभई वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा दक्षिण कोरिया गएको रहस्य खुलेको हो । घले रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएको र कार्यवाहकको जिम्मा सदस्यलाई तीन महिनाभन्दा बढी दिन नमिल्ने भएकाले उप निर्वाचन गर्नुपर्ने केही सदस्यहरुको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को ग बमोजिम आपूmले कार्यवाहक अध्यक्ष जिम्मेवारी दिएका दावी गरे । उता वडा नं. ३ मा समेत वडा सदस्यले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
वडा अध्यक्ष तोयनाथ ढुङ्गानाको हृदयघातका कारण केही महिना अघि मृत्यु भएको थियो । वडा अध्यक्षको मृत्यु भएकाले केही कार्यापालिका सदस्यहरुले उप निर्वाचन हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । वडा अध्यक्ष ढुङ्गानाको मृत्यु भएपछि महिला वडा सदस्य सुनिता कार्कीले जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् ।
Tagsbom Bahadur Ghale Korea